Kenya oo ku hanjabtay inay tallaabo ka qaadi doonaan Shirkadaha Isgaarsiinta Somalia – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Kenya oo ku hanjabtay inay tallaabo ka qaadi doonaan Shirkadaha Isgaarsiinta Somalia
Wasiirka Warfaafinta ee dalka Kenya, Fred Matangi’i ayaa sheegay inay Shirkadaha Telefoonadda ee Somalia carqalad ku hayaan nidaamka Isgaarsiineed ee dalkiisa.
Waxa uu tilmamaay inay khatar ku hayaan Shabakadda Isgaarsiinta Kenya, isla markaana ay cabsi dhinaca ammaanka ku hayaan Degmooyinka Kenya ee kaabiga ku haya xuduudka Somalia.
Wasiirka Warfaafinta ee dalka Kenya, waxa uu sheegay inay cabasho ka soo gaartay Ciiddanka Ammaanka iyo kuwa Milliteriga Kenya, kuwaasi oo codsaday in tallaabo adag laga qaado Shirkadaha Isgaarsiinta Somalia ee bixiya Adeegyadda Mobayladda.
“Waxaan ka walaacsanahay faragelinta Shabakadaha Mobaylada, khas ahaan xuduudka Bariga Kenya ee Hawlgalladda Mobayladda Somalia” ayuu yiri Wasiirkasi, oo intaasi ku daray inay khasab tahay inay Kenya tallaabo adag ka qaadan Shirkadaha Isgaarsiinta Somalia.
Waxa kaloo uu ku nuuxnuuxsaday inuu labo bilood ka hor dhigiisa Somalia kala hadlay khalkhalka ay Shirkadaha Isgaarsiinta ee Somalia ku hayaan habka Isgaarsiinta iyo Ammaanka Kenya.
Wasiirka Warfaafinta ee Kenya waxa uu intaasi ku daray inay xadidan tahay Tallaabooyinka la qaaday, maadaama ay Shirkadaha Isgaastiinta Somalia yihiin kuwo aan Laysimo lahayn, lana maamulin.
Hadalkiisa ayaa waxa lagu fasiran karaa inay caqabad ku yihiin Taawaradda Shirkadaha Isgaarsiinta Somalia ku leeyihiin Degmooyinka u dhow xuduudka Kenya, iyadoo ay inta badan Soomaalida Kenya ee deggan W/bari Kenya adeegsadaan SIM Cards-ka Shirkadaha Isgaasrsiinta Somalia oo ka jaban qiimo ahaan Shirkadaha kale ee Kenya.
Qeylo-dhaanta ay Dowladda Kenya ka muujinayso Taawaradda Shirkadaha Isgaarsiinta Somalia ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay Dowladda Kenya walaac xooggan ku hayaan Dagaalamayaasha Alshabaab ee hawlgalladda ka fuliya Degmooyinka Kenya ee ku teedsan Xuduudka Somalia.
Sirdoonka Somalia iyo Alshabaab oo ka hadlay duqeyn lagu dilay Sarkaal Sare oo ka tirsan Alshabaab
Musaabaqada Akhriska Qur’aanka oo ay Xawaaladda Taaj iyo Radio Dalsan soo qabanqaabiyeen oo la soo gebagebeeyey